Erey SAMO-TALIS: Farriin Ku Socota Suldaanka Guud, Wasiirka Hawlaha Guud iyo Shacbiga Somaliland!..W/Q Siciid Maxamuud Gahayar | Somaliland Today
← Cali Iyo Ciidagale Halakala Celiyo.
DAAWO: Dadweynaha Degmada Cali Xirsi Ee Gobolka Saraar Oo Hay’adda Cuntada Adduunka Ee FAO Ku Eedeeyay Inay Musuq-maasuq →
Erey SAMO-TALIS: Farriin Ku Socota Suldaanka Guud, Wasiirka Hawlaha Guud iyo Shacbiga Somaliland!..W/Q Siciid Maxamuud Gahayar
Tan iyo 20kii Sebtember 2017ka oo ay qabsoontay munaasibaddii qalin-jebinta Jaamacadda Hargeysa waxa Wasiirka Hawlaha Guud, Guryaynta iyo Gaadiidka Somaliland Md Cali Xasan Maxamed (Cali-Mareexaan) ku socday gantaallo cir iyo dhul ah.
Waxyaabaha lagu dhaliilay waxa ka mid ahaaiibka gurigii Badhasaabka Awdal, Suuqii Casriga ahaa ee Burco, Xabaalo Berbera ah, Dugsiga Riis, Xayiraadda Dhulka Madaarka, Dhul 31ka Mey/Hargeysa ah, Deyrka Hanti-dhawrka Guud IWM.
Xisbiyo mucaarid ah, salaaddiin, abwaanno, fannaaniin, siyaasiyiin iyo dad badan ayaa laba-gacmoodiyay. Xilliyada qaar si cuddoon ayuu u war-celiyay, caddaymo ayuu keenay, waxaanu ku guulaystay inuu gaashaanka u daruuray qaybo ka mid ah eedaha la huwiyay. Eedaha qaarkood waxa lahaa masuuliyiin kale oo dawladeed, waxaana loo saaray si qaawan, dee mana odhan karno 100% ayuu ceeb-ka-saliim yahay.
Haddii aan weliba si gooni ah u xuso, Suldaanka Guud ee Beelaha Somaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaaddir waxa uu saddex jeer cod-baahiyaha u qabsaday in uu dhaliilo wasiirka Hawlaha Guud, waxaanay eedaymahaasi ku soo baxeen muddo laba toddobaad gudahood ah. Shantii cishaba hal mar ayuu Suldaanku cambaarayn huwinayay Wasiirka.
Abwaan Dhako oo sifaynaya dulqaadkii Madaxweyne Rayaale ayaa yidhi:
Maxaan gooh isugu daray
Ninku geed adkaayaa!
Md Cali Mareexaan wuxuu muujiyay dulqaad, bisayl iyo ragannimo, laakiin nin ay habari dhashay hal ma seegi waayo. Waxa uu xejistaba, Wasiirku waa uu ka damqaday gantaalihii sida dhibica ugu dhacayay. Waxaas oo karti ah waxa isku fuuqasaday hadalkii uu dhawaan Wasiir Cali Xasan yidhi “Saxaafaddu waa in aanay dadka qaarkood habeenkii wax ka duubin”.. Marka la isku xambaariyo wax aan xaqiiqo ahayn, waxa ka dhasha warcelin xanaf leh oo laga xanaaqo.
Wasiir Cali waxa aanu arkaa masuul ama shakhsi ku gefay Suldaankiisii, lama kala xigtaysan karo Suldaanka Guud iyo Wasiirka, waayo waxa uu ka mid yahay ummadda uu Suldaanku madax-dhaqameedka u yahay. Aniga oo Siciid Maxamuud Gahayr ah, yaa iga xaal siinaya haddii wiilkaygu igu gefo? Suldaanku waa in uu dulqaato, isla markaana aanu wax weyn ka soo qaadin weedhaha ay ummaddu qoonsatay.
Sidoo kale ma jiro xaal laga keenayo Bariga Burco, waayo Cali ma qaldamin isaga oo xil u haya qabiil, isaga oo masuul qaran ah ayuu hadlay. Cid kasta oo qaranka ka mid ah ayaa xaal ka bixin karta, aniga ayaaba xaalkii bixinaya. Sidoo kale waxa aan leeyahay haddii Wasiirka lagu eedeeyay in uu xaraashay xabaalo uu joojiyay, hor istaagga digreeto madaxweyne isaga oo ilaalinaya dhulka madaarka iyo eedo kale oo aan qabannin, kuwaasna aniga ayaa xaal ka bixinaya. Weliba waxqabadku kuma koobnaan doono xaal iyo hadal aan warbaahinta mariyo, waxa aan Eebbe ka rejaynayaa in la isugu yimaado kulanno fool-ka-fool ah oo la isku laab-xaadho, la isugu duceeyo, la isugu niyad-samaado, la iskuna saamaxo.. Wixii daantaana dooxu ha qaado, wixii daantaana dabayshu ha qaaddo.
Fool-xumooyinka kale ee aan ka talinayo waxa ka mid ah in ay duullaan mar wada qaadaan Xildhibaan, Caaqil, Guddoomiye Xisbi, Suldaan iyo dhallinyaro isku deegaan ahi, iyaga oo weliba weerar ku ah masuul keliya ama hal qof.. Waa la is qabtaa, ma qurxoona in aynu mar wada yulqannaa.
Abwaan Cabdillaahi Xasan Ganey oo ka digaya wixii bulshada kala geyn kara ayaa yidhi:
Xaqaan isku leennihiyo
Ha goyn xididdada bulshada
Xurmadu yaynaga dhammaan
Xamaasad u nool ha noqon
Xasaasiya oo la diro
Dantii loosoo xushiyo
Xalkii doon lagu lahaa
Nimaan xallin oon dhammayn
Dalkeennana aan xafidin
Hadduu xadhig meel ka jaro
Ayaan xiisuhu ku lulin
Ugu dambayntii, midh waxa aan leeyahay Suldaanka, midhna waxa aan leeyahay wasiirka, midhna waxa aan leeyahay bulshada Somaliland
Midh waxa aan leeyahay Suldaanka Guud: Adiga oo Wasiirka iyo Madaxweynahaba Suldaan u ah, isla markaana arki kara saacadda aad doonto, ilama wanaagsana in aad cambaarayn joogto ah dusha u saarto masuul aad si kale u canaanan karto
Midhna waxa aan leeyahay wasiirka, wasiir dee madax-dhaqameedka waxa aalaaba u jawaaba dhiggooda, intii aad afka furan lahayd waxa qurxoonayd in aad cid kale ka dhex hadasho, haddii aad garatay in aad is difaacdana waxa habboon in aad isu garnaqsato hab aad ku soo jiidato ragga dhanka kale ka safan.
Midhna waxa aan leeyahay bulshada Somaliland, waxa habboon bulshadu in ay qabato kooda qaldan, waa ceeb inaynu soo raacno nin qar iska tuuraya oo aynu tol nahay. Siyaasiyiinta iyo xisbiyada waa la kala raaci karaa, laakiin waa in aynu mar walba isu dhawaynno hoggaanka dhaqanka iyo masuuliyiinta qaranka: mucaarid iyo muxaafidba. Yaynaan dhex cararin laba qof oo xaalkooda wada-hadal ku dhammaysan kara, isla markaana noqon kara kuwo isaga keen dhaw.